Tag: multiple domain spf
Meelo badan oo ka tirsan Diiwaankaaga SPF
Isniin, Janaayo 14, 2013 Jimco, Juun 19, 2015 Douglas Karr
Waxaan kor u qaadnay wargeyskeena toddobaadlaha ah (hubi inaad isqorto!) Waxaanan ogaaday in sicirkeenna furan iyo dhag-dhiggu aad u hooseeyo. Fursadaha ayaa ah in badan oo ka mid ah emaylladaasi aysan ku soo gaarin sanduuqa gabi ahaanba. Hal shay oo muhiim ah ayaa ahaa inaan haysanno diiwaan SPF - diiwaanka qoraalka DNS - taas oo aan tilmaamaynin in adeeg bixiyahayaga cusub ee adeegga email uu ka mid ahaa kuwa noo soo diray. Bixiyeyaasha adeegga internetka waxay u isticmaalaan diiwaankan inay
Toddobaadkii hore waxaan u istaagay burrito McSkillet ah oo ku saabsan shaqada. Waxaan u maleynayaa inaan qoro qoraal kaliya sida aan ujeclahay kuwaas iyo Qdoba quraacda burritos, laakiin waan kuu tudhi doonaa. Intii aan joogay McDonalds, xiisaha aan u qabay ayaa sida ugu fiican aniga iga helay waxaanan dalbaday McCafe Mocha halkii aan ka joogsan lahaa dukaan kafee aan ka jeclahay. Midabyo, calaamado casri ah iyo baakado leh codadka dhulka ayaa kugu xeeran oo kaa dhigaya inaad dareento sidii